साधारण जीवनभन्दा माथि उठ्न हौस्याउने ‘बियोण्ड द पोसिबल’ | We Nepali
साधारण जीवनभन्दा माथि उठ्न हौस्याउने ‘बियोण्ड द पोसिबल’
२०७७ मंसिर ११ गते १०:३९
पर्वतारोहण क्षेत्रमा बितेको केही वर्षमै निर्मल पुर्जाले अलग पहिचान बनाइसकेका छन् । खासगरी गतवर्ष छ महिना छ दिनको छोटो अवधिभित्रै विश्वका आठहजार मिटर अग्ला सबै हिमाल आरोहण गरेर । हुन त यसअघि नै स्वर्गीय आङरिता शेर्पालाई धेरैपटक सगरमाथा आरोहण गरेका कारण ‘हिमचितुवा’को पदवी दिइसकिएको थियो तर वास्तविक हिमचितुवा चाहिँ निर्मल पुर्जा रहेछन् । किनकि चितुवा सबैभन्दा छिटो दौड्ने प्राणीमध्ये एक हो र पुर्जाले पनि हिमाल आरोहणमा चितुवाजस्तै द्रुत गतिमा दौडेर करिब आधा दर्जन विश्व कीर्तिमान राखिसकेका छन् ।
उनै पुर्जा आफ्नो हिमाल आरोहणको कथाब्यथा बोकेर पुस्तकका माध्यमबाट पाठकसामू आएका छन् – ‘बियोण्ड द पोसिबल’ मार्फत । बियोण्ड द पोसिबलमा उनले २१ वटा शीर्षकमा आफ्नो बाल्यकालदेखि गोरखा सैनिक, स्पेशल बोट सर्भिसको सदस्य हुँदै १४ वटा आठ हजार मिटर अग्ला हिमाल आरोहण गर्दाका कथा बुनेका छन् ।
पुर्जा करिब १७ वर्षदेखि बेलायतमा बस्दै आए पनि दुई/तीन वर्षयता मात्र नेपाली समाजमा धेरै चिनिएका हुन् । यस पंक्तिकारको करिब एक दशकको बेलायत बसाइको अनुभवमा जब उनले छोटो समयमा सगरमाथा, ल्होत्से र मकालुको आरोहण गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम राखे तत्पश्चात उनको पर्वतारोही व्यक्तित्व सार्वजनिक भएको हो । त्यहीबेला प्रश्न उब्जिएको थियो – यस्तो विश्व कीर्तिमानी आरोहीको कथा किन उनी सगरमाथाबाट ओर्लनासाथ नेपाली मिडियामा नआएको होला ? करिब आठवर्ष नेपालको मूलधारको ब्रोडसिट दैनिकमा पर्वतारोहण बिटमा काम गरेको यस पंक्तिकारको पूर्वानुभवमा आधारित जिज्ञासा थियो त्यो । पुस्तकमा उनले सो प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
यसबाहेक उनले आफू पर्वतारोहणमा लाग्नुको कारण, सबैभन्दा छोटो समयमा विश्वका आठ हजार मिटर माथिका सबै हिमाल आरोहण गर्ने अठोट लिनुका कारण र सो अठोटलाई पूरा गर्न खेप्नुपरेका सास्तीहरु, खर्च जुटाउन भोग्नु परेको हण्डरहरु, हिमाल आरोहणमा खेप्नुपरेको शारीरिक र मानसिक जोखिमहरु, हिमाल चढ्दाका राजनीति, हिमालको पर्यावरणीय अवस्था लगायतका विषयमा आफ्नो अनुभव पुस्तकमा पोखेका छन् ।
एकातिर आफ्नो दृढप्रतिज्ञा अर्कोतिर पारिवारिक चिन्ता । वृद्धावस्थाका आमाबुबाको जिम्मेवारी । श्रीमतीको माया । आफूलाई बाटो देखाउने दाजुहरुको स्नेह । यी सबैलाई सन्तुलनमा राखेर पाइला पाइलामा ज्यान जानसक्ने जोखिम उठाउँदै आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नु उनलाई पक्कै सजिलो थिएन । त्यसैले उनको यो विश्व कीर्तिमानले उनलाई व्यक्तिगत रुपमा त चिनायो नै यससँगै विश्वका धेरै युवायुवतीहरुलाई दृढइच्छा भयो भने कुनै पनि काम असम्भव छैन भन्ने महत्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको छ । त्यसैले उनको यो कथा उनको मात्र होइन समग्र पाठकहरुका लागि प्रेरणाको स्रोत हो । उनको कथा पढेर हिमाल नै चढ्न पर्छ भन्ने होइन तर आफूलाई जुन विषय र क्षेत्रमा रुचि छ त्यसमै प्रतिवद्ध भएर सफलताको शिखर आरोहण गर्ने आत्मविश्वास हासिल गरे पुग्छ ।
धेरै मानिसले जीवनमा यस्ता अद्वितीय कार्यहरु गरे । तर त्यस्ता सार्वजनिक कार्य थोरै समय मात्र स्मरण गरिने सर्वव्यापी मान्यता नै हो । तर त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्दा पुस्तौँपुस्ताले सम्झिरहन र उत्प्रेरित भइरहन सक्छ । तसर्थ आफ्ना अनुभवलाई पुस्ताकाकार दिएकोमा निर्मल पुर्जालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नैपर्छ ।
पुस्तक पढ्दा कहिले कुन कुन हिमालको टाकुरामा आफैँ उभिए जस्तो लाग्छ । कहिले चिप्लेर तलतल पुग्दा मरिन्छ कि बाँचिन्छ जस्तो लाग्छ । हिमालमा अलपत्र परेका यात्रीलाई उद्धार गरिएको पंक्तिमा पुग्दा मानिस जति जोखिममा रहे पनि बाँच र बचाउ भन्ने मानवता रहिरहने रहेछ जस्तो लाग्छ । सेकेण्ड सेकेण्डको महत्व रहने हिमालमा निजी स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नेहरु र सामूहिकतामा अर्घेलो हुनेहरु देख्दा कुटुँ कुटुँ लाग्छ । पुस्तक पढिरहँदा समग्रतामा कतै निर्मल पुर्जाले आफूलाई अलि साहसी नै देखाउन पो खोजेका हुन् कि जस्तो पनि नलाग्ने होइन ।
पुर्जाले आफ्नो मिसन पूरा गर्नका लागि छँदाखाँदाको जागिर त्यागे । करिब ७ लाख ५० हजार पाउण्ड बजेट अनुमान गरिएको अभियान पूरा गरेरै छाडे । उनले पुस्तकमा आफ्नो अभियानलाई विश्वास नगर्नेहरु प्रशस्त थिए भनेर उल्लेख गरेका छन् । तर अहिले उनको अभियान पूरा भएपछि उनी प्रतिको दृष्टिकोणमा के कस्तो बदलाब आयो ? अहिले उनको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो ? अहिले उनको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ भन्ने बारेमा भने पुस्तक मौन छ । शायद उनले यी कुरा अर्को पुस्तकका लागि साँचेका हुन् कि ?
पुस्तक : बियोण्ड द पोसिबल
लेखक : निम्सदाइ पुर्जा
प्रकाशक : होडर एण्ड स्टोटन
मूल्य : १४.७१ पाउण्ड (पेपरब्याक)